Budata Offroad Racing maka Windows
Budata Offroad Racing
Free Budata maka Windows (26.20 MB)
Budata Offroad Racing,
Racing Offroad bụ egwuregwu ịgba ọsọ nke na -enye gị ahụmịhe ịgba ọsọ ụgbọ ala dị iche iche ị nwere ike igwu nefu na kọmpụta gị nwere ụdị Windows 8 ma ọ bụ karịa.
Nadịghị ka egwuregwu ebe anyị na-agba ụgbọ ala agba agba mara mma nokporo ụzọ agba korota, Offroad Racing na-enye anyị mkpali dị iche, nke na-akpọga anyị na mbara ala ma na-enye anyị ohere ịgba ọsọ nokporo ụzọ kpuchiri ekpuchi na ihe mgbochi. Negwuregwu ahụ, nke gụnyere mgbako physics dị elu, kama ịgba ọsọ naanị nokporo ụzọ dị larịị, anyị ga -emerịrị ọnọdụ dị na ọsọ ọsọ ma dozie ụgbọ ala anyị nọnọdụ ya. Ọdịdị egwuregwu egwuregwu a na -atọ ụtọ nke egwuregwu na -enye egwuregwu ịgba ọsọ na -atọ ụtọ nke chọrọ mgba.
Enwere ike igwu ọsọ egwuregwu nke ọma na nka. Negwuregwu ahụ, anyị nwere ike ịnakọta ọla edo noge asọmpi anyị nwere ike iji ọla edo ndị a meziwanye ụgbọ ala anyị na -emepe yana imepe ngalaba ọhụrụ. Enwekwara ike ịnweta ọla edo ọzọ site na ịme mmegharị acrobatic na egwuregwu ahụ.
Racing Offside nwere HD eserese eserese ejiri aka see. Ekele maka usoro a, nke na -enye egwuregwu ahụ ọmarịcha anya, egwuregwu nwere ike na -agba ọsọ nke ọma nihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kọmputa ọ bụla. Anyị nwere ike zụta ụgbọ ala 6 dị iche iche na egwuregwu ahụ, anyị nwekwara ike iwusi atụmatụ ụgbọ ala ndị a ike dị ka injin, nkwusioru na taya. Enwekwara ọrụ ndị na -enye ụgwọ ọrụ kwa ụbọchị na egwuregwu ahụ.
Offroad Racing Ụdịdị
Nha faịlụ: 26.20 MB